Semalt SEO को स्तम्भको रूपमा प्राधिकरण
SEO यसको आफ्नै कार्य गर्न सक्दैन; यो धेरै तत्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जुन सहि अनुपातमा मिसाउँदा राम्रो संगठित एसईओ दिन्छ। यद्यपि त्यहाँ चार मुख्य स्तम्भहरू हुन्छन् जब राम्रो संगठित SEO निर्माण गर्दछन्। भवनहरूमा जस्तै स्तम्भहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तिनीहरूले घरको तौल लिन्छन् र कठोर संरचना प्रदान गर्दछ जुन भवनलाई सबैभन्दा कठोर मौसममा पनि बाँच्न मद्दत गर्दछ। यही एसईओ को स्तम्भहरूमा लागू हुन्छ। यी तत्वहरूले कंकाल बनाउँदछन् जसमा हामी SEO अनुकूल वेबसाइटहरू र वेब सामग्री निर्माण गर्दछौं।
खोजी ईन्जिन बट्स प्राधिकरण, प्रासंगिकता, र सामग्रीको वेबसाइटमा प्रयोग र वेबसाइटमा प्रयोग लिंकहरूको खोजी गर्दछ। यी तत्वहरूले प्रमाणित गर्दछ कि तपाईंको वेबसाइट सुरक्षित ईन्जिनको लागि उपयोगी छ र तिनीहरूलाई यो पहिलो पृष्ठमा सार्न प्रेरित गरिन्छ। Semalt, एक SEO विशेषज्ञ को रूप मा, वेबसाइटहरु पहिलो पृष्ठमा पुग्न मद्दत गर्न आफ्नो ज्ञान र रणनीतिहरू पॉलिश गर्न वर्षौं बित्यो। नतिजाको रूपमा, हामीसँग हजारौं वेबसाइटहरू छन् जुन Semalt निर्माण गरियो र पहिलो पृष्ठमा लगियो।
इन्टर्नेट र खोज इञ्जिनको एक समयको कल्पना गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् कि यसले सूचना पाउनु कत्ति गाह्रो छ, विशेष गरी ती क्षेत्रहरू जुन तपाईंबाट भौगोलिक रूपमा टाढा थिए। यसको मतलव हामीले क्वेस्टहरूमा जानुभएको थियो, एउटा स्रोत खोजी गर्दै जुन हाम्रो प्रश्नहरूको उत्तर थियो।
कल्पना गर्नुहोस् तपाईं आइन्स्टाइनको सामान्य र सापेक्षताको विशेष सिद्धान्त बीचको भिन्नता अध्ययन गर्न चाहानुहुन्छ। तपाई सायद आफ्नो अर्को ढोका छिमेकीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, तर के हुन्छ यदि उनिहरुलाई उत्तर थाहा छैन भने? यदि तपाइँ एक भौतिक विज्ञान प्राध्यापक सोध्न सक्नुहुन्छ, कि तपाइँको उत्तर प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ, तर यी विकल्पहरु को लागी चुनौतिहरु कल्पना गर्नुहोस्। अन्तमा तपाईले पुस्तकालयमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एक लाइब्रेरियनले तपाईंलाई केहि पुस्तकहरूको लागि मार्गनिर्देशन गर्दछ जसले तपाईंको समस्याको जवाफहरू प्राप्त गर्न तपाईंको शीर्षकमा प्रकाश दिन्छ।
एक SEO स्तम्भको रूपमा प्राधिकरण
माथिका प्रत्येक केसहरूमा, अन्वेषक जो यस अवस्थामा, "तपाइँ" हुन् सूचनाको स्रोतमा निर्णय गर्नुपर्‍यो। त्यो निर्णयले जानकारीको स्रोतको तपाईंसँग सबै भन्दा बढी अधिकार थियो भनेर चिह्नित गर्‍यो। एसईओ मा प्राधिकरण गुणात्मक मापन हो जुन वेबसाइट र यसको सामग्रीको दृश्यता सुधार गर्दछ, यसलाई राम्रो र्याक गर्न मद्दत गर्दै। यो एक मुख्य अभ्यास पनि भएको छ जुन SEO विशेषज्ञहरू जस्तै Semalt तपाईंको वेबसाइटको रैंक राम्रोसँग मद्दतको लागि प्रयोग गर्दछ। अब, यहाँ कसरी आधिकारिकताले काम गर्दछ। एक वेबसाइट को अधिकार ले यातायात को संख्या निर्धारण गर्दछ। उदाहरण को लागी, जब गुगल खोज ईन्जिनको बारेमा आउँदछ सबैभन्दा अधिक अधिकारका साथ वेबसाईट हो। यो कारण तपाईं सम्भवतः आफ्नो पूर्वनिर्धारित खोज ईन्जिन गुगलमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको कुनै पनि उपकरणमा।
हामी एसईओ प्राधिकरणको शाखामा छलफल गर्नेछौं, अर्थात्:
SEO प्राधिकरण अझ राम्ररी बुझ्नको लागि हामी उनीहरू प्रत्येकको अध्ययन गर्ने छौं र कुन क्षेत्रले उनीहरूलाई प्रभाव पार्दछन् भनेर हेर्नेछौं।
शब्द डोमेन प्राधिकरण MOZ ले यसको मेट्रिक शुरू गरे पछि लोकप्रिय भयो। यो त्यहि हो जहाँ तपाइँ प्राय: एसईओ अधिकारसँग सम्बन्धित भ्रम फेला पार्नुहुनेछ। केहि व्यक्तिहरूले डोमेन प्राधिकरण भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछ जब डोमेन प्राधिकरणको बारेमा छलफल गर्दा हुन्छ, जबकि अरूले MOZ मेट्रिकको बारेमा कुरा गर्दा। हामीले बुझ्नुपर्दछ कि डोमेन प्राधिकरणको अर्थ एक मेट्रिक मात्र होईन।
चीज खाली गर्न, हामी एक अवधारणाको रूपमा डोमेन प्राधिकरण र एक मेट्रिकको रूपमा डोमेन प्राधिकरणको बारेमा छलफल गर्नेछौं। के तपाईंले कहिले पेजर्र्याक एल्गोरिथ्मको बारेमा सुन्नुभएको छ? जबकि यो अझै पनि गुगलको एल्गोरिथ्म को एक हिस्सा को रूप मा प्रयोग गरीएको छ, यो वर्षौं को लागी सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन। यो डोमेन अधिकार मापन गर्न प्रयोग गरिएको पहिलो मेट्रिक पनि हो।
डोमेन प्राधिकरण भनेको के हो?
डोमेन प्राधिकारी एक संकेत हो कि कति डोमेनले धेरै सिग्नलहरू बाट बनेको रैंक गर्न सक्दछ जुन वेबसाइट उच्च गुणवत्ताको हो भनेर प्रमाणित गर्दछ, र यसको सामग्रीलाई विश्वास गर्न सकिन्छ। यी तत्वहरू के हो जुन डोमेनको अधिकारको गठन गर्दछ।
यी तत्वहरू हुन्:
उमेर र भरोसा
राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएको प्रमाणित डोमेनहरू वर्षौंसम्म बाँच्दछन्। यसले गुगललाई थाहा दिन्छ कि उनीहरूले उच्च श्रेणीको अधिकार कमाएका छन्। राम्रो ट्र्याक रेकर्डको लागि, हामी भन्न सक्दछौं कि वेबसाईटले Google T&C लाई शायद नै भached्ग गरेको छ।
जबसम्म कुनै वेबसाइट माइग्रेट गर्दैन, खोजी ईन्जिनहरूले एक दिन, हप्ता, वा महिना पुरानो डोमेन आफ्नो पहिलो पृष्ठमा राख्न सक्दैन। प्रत्येक नयाँ डोमेनले पहिले यसको स्थान कमाउनुपर्दछ, र उमेरले त्यसमा भूमिका खेल्दछ। जहाँसम्म, राम्रो सामग्री लेख्नुका साथै राम्रो ब्याकलिंक्स कमाउँदा पनि मद्दत गर्दछ।
उदाहरणको रूपमा आजका सेलिब्रेटीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। हामी मध्ये एक ठूलो संख्या हामी उनीहरुलाई उनीहरुसंग सम्बद्ध गराउन चाहन्छौं त्यस्तै फाइदाको लागि जुन हामी वेबसाइटमा लोकप्रिय हुन लोकप्रिय हुन प्रयोग गर्दछ। एक पटक तपाईं प्रख्यात हुन सक्नुहुन्छ, गुगल र अन्य खोजी ईन्जिनहरूले तपाइँको वेबसाइटलाई उनीहरूको पहिलो पृष्ठमा राख्नेछन किनभने ती लाभहरू पनि लिन सक्दछन्।
लोकप्रियता निर्धारण गर्दा केहि कारकहरू विचार गर्न:
ब्याकलिंक्सको मात्रा: तपाईंको डोमेनमा जति धेरै ब्याकलिks्कहरू छन्, त्यति नै उत्तम छ।
ब्याकलिंक्सको गुणस्तर: गुणवत्ता ब्याकलिks्कले अधिक अधिकार आकर्षित गर्दछ र अधिक विश्वास सिर्जना गर्दछ।
अद्वितीय लिंक गर्ने डोमेनहरूको मात्रा: तपाईंसँग जोडिएको डोमेनहरूको संख्या जति बढी हुन्छ, तपाईंको वेबपृष्ठ अधिक लोकप्रिय हुन्छ जसले तपाईंको ब्रान्ड सचेतना बढाउँदछ।
एक डोमेन को प्रासंगिकता एक डोमेन को क्रम मा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तपाईं सामग्री र डोमेनसँग सम्बन्धित बाह्य लिंकबाट प्रासंगिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ।
डोमेन प्राधिकरणको राम्रो स्तर के हो
यस प्रश्नको कुनै सहि उत्तर छैन। यद्यपि यो सबै तपाईको बजारमा सफल हुनको लागि फोल्छ। जब तपाइँसँग तपाइँको प्रतिस्पर्धा भन्दा अधिक डोमेन अधिकार छ, तपाईंसँग डोमेन अधिकारको सही मात्रा हुनेछ। तर जब तपाई ठूलो बजारमा जानुहुन्छ भने तपाईलाई अधिक डोमेन अधिकार चाहिन्छ। यसैले हामी Semalt मा तपाइँको डोमेन प्राधिकरण सुधार गर्न लगातार प्रयास गर्न को लागी प्रयास गर्दछौं। यो किनभने हामी विश्वास गर्छौं तपाईंको ब्राण्ड र व्यापार सँधै सुधार हुँदैछ र तपाईंको व्यापारलाई जीवित राख्न सुधार गर्न आवश्यक छ। तपाईंको डोमेन प्राधिकरण जति उच्च छ, उत्तम।
डोमेन प्राधिकरण जस्तै, पृष्ठको प्राधिकरण त्यो पृष्ठको श्रेणीकरणको क्षमता हो। पृष्ठ प्राधिकरणले पृष्ठ अधिकार कन्सेप्ट र पृष्ठ अधिकार मेट्रिकमा समान भिन्नताहरू साझा गर्दछ। र डोमेन प्राधिकरणको रूपमा, पृष्ठ प्राथमिकता जति राम्रो छ, त्यति नै उत्तम छ।
पृष्ठ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गर्न सकिन्छ:
लिंकबाट प्राप्त मूल्यको मात्रा
पछिल्लो अपडेटको ताजगी
राम्रो ट्र्याक रेकर्डको साथ धेरै पृष्ठहरू वर्षौं बितेका छन्, जसले उनीहरूलाई दर्जा दिन सहयोग पुर्‍यायो। नयाँ वेब पृष्ठहरूले सामान्यतया उनीहरूको श्रेणीकरण गर्नु अघि उनीहरूको लायक प्रमाणित गर्नुपर्दछ, र यस प्रक्रियामा समय लाग्नेछ। एक वेबसाइटको राम्रो हेरचाह गरेर, हामी यसलाई सही अवस्था प्रदान गर्न सक्दछौं यो उमेरलाई अनुमति दिनको लागि। राम्रो र राम्रो संरचित सामग्रीको साथ भरिएर, एक वेबसाइट इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड लिंकहरू सulating्कलन गर्न शुरू गर्दछ। यसले गुगललाई देखाउँदछ जुन तपाईं विश्वसनीय हुनुहुन्छ, र तपाईं आफ्ना दावीहरूलाई पृष्ठलाई अधिक आधिकारिक बनाउँन सक्नुहुन्छ।
लिंक मात्रा र गुणवत्ता पृष्ठ को अधिकार को सूचक हो। गुणस्तरको आन्तरिक र बाह्य लिंकहरूको प्रशस्तताका साथ अधिकारको केही फारम त्यस्तै वेब पृष्ठमा पनि पास गरियो। डोमेन प्राधिकरणको लागि दिएको व्याख्या जस्तै, तपाईंको साइटमा लिंकहरू गुगलले तपाईंको वेबसाइट फेला पार्न र तपाईंको अधिकार प्रमाणित गर्न मद्दत गर्दछ।
खोज इञ्जिनहरूले प्राय: अपडेट गरिएका पृष्ठहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन्। अधिकार प्राप्त गर्दा, वेब पृष्ठहरू अपडेट रहन र बारम्बार ताजा हुनु आवश्यक छ। यो गरेर, तपाइँ यसलाई असम्भव बनाउनुहुन्छ तपाइँको वेबसाइट मा बासी जानकारी छ, र तपाइँ तपाइँको आगन्तुक नियमित रूप मा ताजा सामग्री दिन्छ। तपाईंले समय-समयमा तपाईंको सबै भन्दा सान्दर्भिक सामग्री भ्रमण गर्नुपर्नेछ र यसलाई नियमित अपडेट गर्नुपर्नेछ र क्रमबद्ध हुने राम्रो मौकाको लागि।
सान्दर्भिक पृष्ठ बनाउने उच्च पृष्ठ आधिकार भन्दा बढि जान्छ। तपाईको सान्दर्भिक कुञ्जी शव्दहरू तपाईंको वेब पृष्ठको चारैतिर बिखेरिएको हुनु पर्नेछ पहिलो SERP पृष्ठमा बनाउनका लागि। तपाईको पृष्ठ सामग्रीलाई कुञ्जी शब्दहरू, आन्तरिक लि ,्कहरू, र बाह्य लिंकहरूको माध्यमबाट सुधार गरेर तपाईको पृष्ठ प्रासंगिकता बढाउनुहुन्छ।
तपाईंको पृष्ठको अधिकार कसरी जाँच गर्ने
तपाइँ तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिएर तपाइँको पृष्ठको अधिकार पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ:
के पृष्ठ केहि उच्च प्रतिस्पर्धा कुञ्जी शव्दहरूको लागि स्तर हो?
पृष्ठमा कति ब्याकलिks्कहरू छन्?
पृष्ठमा ब्याकलिंक्सको गुणस्तर के हो?
यस पृष्ठमा कति अनौंठा लिंक गर्ने डोमेनहरू छन्?
लि authority्क प्राधिकरण लि car्क बोक्ने शक्ति र अधिकारको सूचक हो। अन्य प्रकारको अधिकारसँग जस्तै, लि authority्क अधिकार उच्च, वेबसाइटको लागि जति राम्रो छ। धेरै कारकहरूले तपाइँको प्रत्येक लि in्कमा भएको अधिकारलाई प्रभाव पार्दछन् ती हुन्:
होईन, एट्रिब्यूट अनुसरण गर्नुहोस्: यो ब्याकलिks्कहरूमा सामान्य छ जुन खरिद गरिएको छ र सामान्यतया अर्जित गरिएको छैन।
लि page्क गरिएको पृष्ठको पृष्ठ अधिकार: पृष्ठको प्राधिकरण, जसले लि contains्क समावेश गर्दछ, लि the्क लिने अधिकारको कडा निर्धारक हो।
पृष्ठमा लिंकहरूको मात्रा: पृष्ठ बोक्ने लि links्कहरूको संख्याको बारेमा चतुर हुनुहोस्। पृष्ठले लि a्कको अधिकार निर्धारण गर्दै, धेरै लिंकहरू यति उपयोगी छैन।
लि Link्क स्थान: लि of्कहरूको स्थान उनीहरूको अधिकार रहेको निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण छ। खोज ईन्जिनले पृष्ठको सामग्री (प्रासंगिक लिंक) भित्र लिंकमा अधिक अधिकार विशेषता दिन्छ।
धन्यबाद Semalt, धेरै वेबसाइटहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन्, जुन सर्च ईन्जिन SERPs मा राम्रो पद प्राप्त गर्न उपयोगी साबित भएको छ।